Isamsung icebise ukuba uluhlu lwayo Iiterminal zeGalaxy Zibanzi kangangoko kwaye zingoneliseki kukugcwala kwemarike ngeefowuni zazo ngoku ziceba ukumilisela isixhobo semultimedia enembonakalo yangaphandle efana neefowuni. Imalunga nento ebizwa ngokuba yi-Samsung I-Galaxy Touch okanye igama lekhowudi YP-MB2.
Esi sixhobo siza kufika kunye Android 2.1 kwaye kule nkqubo yokusebenza i Isinxibelelanisi seTouchWiz 3.0 kodwa yaqhelana noko nokusetyenziswa kwemultimedia yesiphelo, inyamalala yonke into enxulumene nokusetyenziswa kwefowuni. Ayizothusa into yokuba xa hlaziya i-Galaxy S kwi-Android 2.2 esi siginali sikwafumene uhlaziyo kwakhona.
Iya kuba sisiphelo sendlela esinempawu zangaphakathi ngokuhambelana nabazalwana baso Galaxy S ukuqala ngeyodwa Umboniso we-4 intshi yeSuper Amoled, Iprosesa yeHummingbird kwisantya se-1 ghz, isenzisi eshukumayo esi-6-axis, iWi-Fi, iBluetooth, irediyo yeFM kunye nokunxibelelana kweGPS. Iya kuthengiswa kwiinguqulelo ezahlukeneyo kuxhomekeke kubungakanani bokugcina ngaphakathi, njenge-8, 16 okanye i-32 Gb.
Izixhobo ezinamandla zokudlala i-DivX, i-OGG, i-Xvid, i-MP3, i-FLAC, iifayile ze-MPEG4, njl.
Ngayo yonke into, sizakuyibona kwimakethi yaseAsia ukusukela nge-11 ka-Agasti ezayo, kwaye ngethemba kamva kwiimarike ezininzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Samsung Galaxy Touch, enye indlela eya kwi-Android kwi-iPod Touch